OtterBox Waxay Soo Bandhigeysaa Meel Lagu Xidho Xarigga Xadhigga Aan Xirneyn Ee iPhone | Wararka IPhone
Shirkadda OtterBox waxaa lagu gartaa sannadihii la soo dhaafay iyadoo bilaabay daboolida, labadaba iPhone iyo iPad, adkaysi u leh ficil kasta oo dhicitaan ah, waana ku habboon yihiin kuwa isticmaala qalabkooda ugu adeegsadaan bey'adaha halista ah, si aad u magacawdo si uun.
Si kastaba ha noqotee, waxay sidoo kale u muuqataa inay qorsheyneyso inay bartilmaameedsato suuqa lacag-la'aanta ah ee lacag-la'aanta ah ee saldhigga OtterSpot, a Saldhiga lacag la'aanta ah ee la qaadi karo oo bixiya awood 5.000 mAh, in ka badan oo ku filan in lagu dalaco iPhone-ga ugu yaraan dhowr jeer.
The OtterSpot dekedda xukun wireless ayaa si gooni ah looga iibiyaa dekedda ku amraya. waa inaan u isticmaalnaa inaan ku dalacno, in kastoo aragti ahaan aysan aheyn inay gaar ahaato maadaama ay u hogaansan tahay borotokoolka Qi, sidaa darteed aragti ahaan waxaan ka dalbi karnaa saldhig kasta oo lacag la aan ah.
Waxaa lagu dhejiyay batari awood leh 5.000 Mah.
Awood bixinta ilaa 10w.
Nalalka nalalka ee nala socodsiiya ee noo sheega heerka batteriga.
USB AC cable si loogu buuxiyo batteriga.
Dusha sare ee aan sibiibix ahayn qaybta sare si uu u xajiyo terminal-ka marka uu amraya.
Qaybta hoose sidoo kale waxay leedahay dusha sare oo aan sibiibix ahayn si looga hortago wax naxdin ah ama dhaqdhaqaaq lama filaan ah, labada qalab, xeedho iyo taleefan casri ah, inay soo dhacaan.
Saldhiga lacag bixinta OtterSpot waxaa lagu qiimeeyaa $ 130. Baytariyada amarka bixiya ee wireless-ka ah ayaa midkiiba lagu qiimeeyaa $ 70 waxaanan isugeyn karnaa illaa 3 saldhigga lacag-bixinta ee OtterBox si aan isla isugu qaadno. Shaki la'aan waa xal fudud oo wax ku ool ah in lagu bilaabo baabi'inta fiilooyinka gurigeenna si dhakhso leh.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » iPhone » Qalabka IPhone » OtterBox Waxay Soo Bandhigeysaa Meel Lagu Xidho Xarigga Xadhigga Aan Xirneyn Ee iPhone
Dukaammada Apple waxay yeelan doonaan fadhiyo Music Lab ah oo lala yeelan doono Taylor Swift